नम्रताले लिइन् फिल्मबाट ब्रेक, अब के गर्छिन् ? « Ramailo छ
नम्रताले लिइन् फिल्मबाट ब्रेक, अब के गर्छिन् ?
नायिका नम्रता श्रेष्ठले फिल्मबाट ब्रेक लिएकी छिन् । फिल्मबाट ब्रेक लिएपछि अब नम्रताले के गर्लिन् ? ‘अब नाटक गर्ने सोच बनाएको छु ।’ मंगलबार आफुले गर्ने नाटक ’गोल्डेन ब्वाई’ को प्रेसमिटमा नम्रताले भनिन् । सन् १९३५ को चर्चित अमेरिकी नाटकको नेपाली संस्करणमा नम्रताले शिर्ष भूमिकामा अभिनय गर्न लागेकी हुन् । प्रदर्शनमा आएको पछिल्लो फिल्म पर्व पछि नम्रताले कुनै पनि फिल्म साइन गरेकी छैनन् ।
मंगलबार नाटकबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको प्रेसमिटमा नम्रताले भनिन्, ‘मैँले फिल्म निर्माण र अभिनयबाट केही समय ब्रेक लिएर ’गोल्डेन ब्वाई’ नाटक गर्न लागेकी हुँ । नाटक गर्न पाउँदा मलाई निकै खुशी लाग्छ । मैँले वर्षमा एउटा नाटक गर्ने सोच पनि बनाएको छु ।’ १ सेप्टेम्बर देखि १० सेप्टेम्बरसम्म त्रिपुरेश्वरको यूनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा रहेको कर्मा बार एन्ड लाउन्ज’ मा मञ्चन हुने नाटकमा नम्रता श्रेष्ठको अपोजिटमा अमृत दाहाल देखिँदैछन् । नाटकलाई अमेरिकी रंगकर्मी डेबोरा मेरोलाले निर्माण र निर्देशन गरेकी हुन् । वर्ष २०७१ मा नम्रताले नेपाली मञ्चमा ’टेलिङ अ टेल’, ’इन द रेड एन्ड ब्राउन वाटर’ जस्ता नाटकको निर्देशन गरिसकेकी छिन् । नाटकमा नम्रता र अमृतका अलावा राजकुमार पुडासैनी, दिव्य देव लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहनेछ । चर्चित अमेरिकी लेखक क्लिफर्ड ओडिट्स द्धारा लिखित ’गोल्डेन ब्वाई’ मा आधारित भएर १९६९ मा हलीउड फिल्म समेत निर्माण भएको थियो ।